Accueil > Gazetin'ny nosy > Antanimena: Iharan’ny fanendahana vao maraina ireo mpianatr’Ankatso
Antanimena: Iharan’ny fanendahana vao maraina ireo mpianatr’Ankatso
Eny andamosin’ny Sekoly Ambaratonga faharoa fototra (Saff eny Antanimena (Ceg) no misy ny toeram-piantsonan’ny fiara fitaterana (zotra 166) miakatra eny amin’ny Oniversiten’Ankatso, ankoatra ny fiara fitaterana 119 eny amin’ny 67 ha. Saika manatona eny ny ankamaroan’ny mpianatra eny Ankatso manodidina an’iny Antanimena, Behoririka, Ankorondrano, Ankazomanga, Soarano, Ambondrona, sy ny hafa iny.
Tsy vitsy moa ireo mpianatra no mamonjy fidirana amin’ny 6 ora eny Ankatso ka tsy maintsy manenjika maka fiara fitaterana amin’ny 5 ora sy sasany, raha tratra aoriana indrindra. Ianjadiam-pahoriana anefa izy ireo noho ny afitsok’ireo jiolahy mpanendaka eny Antanimena eny. Manomboka eo amin’ny fihaonan-dalana (rond point) Antanimena, dia miazo an’iny andamosin’ny Falda iny. Miharo herisetra ny asa fanendahana, ary tena mandraingiraingy izay tratran’izy ireo. Fantatr’ireo mpanendaka rahateo fa saika manana finday ifandraisan-davitra ny mpianatra, ka isan’ny antony anendahan’izy ireo azy ireny.
Miantso ny mpitandro ny filaminana ireo mpianatra mba handray fepetra ka hiaro ny aina sy fananan’izy irero amin’iny faritra iny fa tena fadiranovana.
Fikambanana: Miady ho minisitra ny fikambanana avy any amin’ny faritra
Raha nahatsikaritra isika dia miseho avokoa ankehitriny ny fikambanana avy any amin’ny faritra eto Madagasikara. Fankalazana ny fifampiarahabana nahatratra ny taona sy fanoloana ny birao mpitantana no tena maresaka. Teo aloha teo nefa dia tsy dia hita loatra ireny fikambanana ireny. Nahoana? Mihetsika daholo ankehitriny izy ireo satria miady ny ho minisitra hono. Lasa nivadika pôlitika ny raharaha ankehitriny. Tsy maninona izany satria amin’ny alalan’izany no mba ahazoany manampy kely ny toerana nihaviany. Misy mihitsy aza no miankina tanteraka amin’ireny fikambanana ireny no anendren’ny filoham-pirenena izay olona halainy ho amin’ny toerana ambony ireny. Noho izany dia manana toerana lehibe eto amin’ny firenena ny fikambanana avy any amin’ny faritra. Ny pôlitika koa efa tsy nahavita ny andraikiny intsony. Vokatr’izany nefa izao olana amin’ny fitantanana ny firenena izao. Lasa olona tsy miraharaha pôlitika intsony no mpitondra nefa rehefa tonga eo amin’ny toerana dia tsy maintsy pôlitika no itondrana ny firenena.
Fa nahoana no tsy misy ny fikambanan’Imerina eto Antananarivo? Satria efa “cadre intellectuel” avokoa ny ankamaroan’izy ireo ka efa nilaozan’ny toetr’andro izany fikakamban’ny “cadre intellectuel” eto Imerina izany.